Voataonan’ny Fanahy hijoro ho vavolombelona
" Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba hahazoanareo firaisana aminay koa; ary ny firaisanay dia amin’ ny Ray sy amin’ i Jesosy Kristy Zanany. "1 Jaona 1:3
Ny asa natomboka tao anatin’ny fahosana sy haizina dia tsy mitsahatra ny mitombo sy mihamafy hatrany. Ireo trano fanontam-boky sy ireo asa misionera hita manerana ny firenena maro dia manamarina izany. Ankehitriny, boky samihafa miisa an’arivony no atonta ary aparitak’ireo trano fanontam-bokintsika raha toa karazan-gazety iray no hany navoakantsika taloha. Niahy izany asa izany Andriamanitra ka nahatonga izany hahomby sy hitombo fatratra.
Ireo tantara niainako vao tsy ela izay dia misy ifandraisany amin’ireo orin'asa maro vao niorina eto anivontsika ary ananako fifandraisana ety dia ety manokana. Raha ny momba ny fandrafetana ireny rafitra ireny kosa dia samy niasa izahay mivady, na tamin’ny alalan’ny penina, na tamin’ny alalan’ny feo. Raha hiverenana ireny taona nolalovanay ireny, na hofintinina aza, dia tsy ho ampy mihitsy izao resadresaka ifanaovantsika izao. Manamafy ny ezaka rehetra ataony i Satana mba hanakanana ireny asa ireny ary hamotehana ireo mpiasa; kanefa Andriamanitra dia miahy ireo mpanompony sy ny asany.
Raha mitodika mijery ny lasantsika aho – na dia efa niroso miandalana hatrany aza isika – dia izao no azoko lazaina : « Deraina anie Andriamanitra! » Rehefa mijery izay nataon’ny Tompo aho, dia feno fihaikana sy fahatokiana an’i Kristy izay mpitarika antsika. Tsy misy tokony hatahorantsika ny amin’ny hoavy, raha tsy hoe adinontsika ny lalana izay nitondran’ny Tompo antsika sy ireo fampianarana izay noraisintsika tamin’ny lasa.
Manana trosa amin’Andriamanitra isika, ny amin’ireo talenta sy fahasoavana nomeny antsika mba hanandratantsika ny fahamarinana amin’ny alalan’ny fahamasinan’ny toetrantsika, sy mba hanomezantsika hafatra fampitandremana sy fampaherezana, fanantenana ary fitiavana ho an’ireo izay miaina ao anatin’ny haizin’ny fahadisoana ary ny fahotana.